Dhamaadka: Barako & Lacnaday - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Dabacaadeennii la soo dhaafay waxaan eegnay xeerarka Ilaah na siiyey si aan u aqoonsano nebiyada runta ah – In ay sii odorosaa mustaqbalka, sida qeyb ka mid ah fariintooda. Markaas Nabi Muuse (NNKH) qudhiisu way khusaysay xeerkan – wuxuu ka sameeyey saadaasha ku saabsan mustaqbalka ee reer binu Israa’iil – Kuwa lahaa inay rumowday haddii uu fariintiisu ka timid Ilaah. Saadaashani waxay ka imaanayeen Lacnada iyo Barakada reer binu Israa’iil. Waxaad ka akhrisan kartaa Barakada & Lacnada oo dhamaystiran halkan. Waxaan ku muujin doonaa fikradaha ugu muhiimsan halkan hoose.
Nabiga Muuse(NNKH) waxa uu ku bilaabay sharaxaadiisii barakooyinka cajiib ah in reer binu Israa’iil heli lahaa haddii ay addeeci lahaayeen Ammarradda. Barakadoodu waxay noqon lahaayeen mid Rabbiga hortiisa quruumaha kale si ay u aqoonsan lahaayeen Barakooyinkiisa. Siday ugu qoran tahay
Oo dadka dunida oo dhammu waxay arki doonaan in laydiinku yeedhay magicii Rabbiga, wayna idinka cabsan doonaan. (Sharciga Kunoqoshadiisa 28:10)
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay ku fashilmaan in ay adeecaan Ammarradda markaas waxay helayaan Lacnadalad oo ka soo horjeeda Barakooyinka. Lacnadalooyinkuna waxay u dhigmi lahaayeen Barakooyinka. Markale habaarradaasna lagu arki doono quruumihii hareerihiisa ku wareegsanaa
Oo dadyowga Rabbigu idiin geeyn doono oo dhan dhexdooda waxaad ku ahaan doontaan yaab iyo maahmaah iyo halqabsi. (Sharciga Kunoqoshadiisa 28:37)
Oo Lacnadu waxay ku noqon doontaa reer binu Israa’iil nafsadooda
Oo waxay calaamad iyo yaab ku dul ahaan doonaan idinka iyo farcankiinnaba weligiin. (Sharciga Kunoqoshadiisa 28:46)
Markaasaa Ilaah ka digay in qaybta ugu xumaa ee lagu Lacnaday ka iman dadka kale.
Rabbigu wuxuu meel fog oo dhulka darafkiisa ah idinkaga keeni doonaa quruun sida gorgorka u duulaysa oo aydaan afkeeda garanayn, oo ah quruun weji cabsi badan, oo aan dadka waayeelka ah maamuusin, aan dhallaankana u nixin. Oo dadkaasu wuxuu cuni doonaa midhaha xoolihiinna iyo midhaha dhulkiinna, ilaa aad baabba’daan, oo weliba idiinkama tegi doono hadhuudh, iyo khamri, iyo saliid, iyo dhasha lo’diinna, iyo tan idihiinna, ilaa uu idin halligo. Oo meel kasta oo dhulkiinna ah ayuu dhammaan irdihiinna idinku hareerayn doonaa ilaa derbiyadiinna deyrka dheer ee aad isku hallayseen ay soo wada dhacaan, oo wuxuu idinku hareerayn doonaa irdihiinna oo dhan ee dhulka Rabbiga Ilaahiinna ahu uu idin siiyey oo dhan. (Sharciga Kunoqoshadiisa 28:49-52)
Oo waxay u noqon lahaayeen xumaan oo ay ka sii xumaan lahaayeen
Oo sidii Rabbigu idiinku farxay inuu wanaag idiin sameeyo oo uu idin badiyo, ayuu sidaas oo kale ugu farxi doonaa inuu idin halligo oo idin baabbi’iyo, oo idinka waa laydinka rujin doonaa dalka aad ugu socotaan inaad hantidaan. Oo Rabbigu wuxuu idinku kala dhex firdhin doonaa dadyowga oo dhan, iyo tan iyo dunida geesteed iyo ilaa geesteeda kale, oo halkaas waxaad ugu adeegi doontaan ilaahyo kale oo qoryo iyo dhagax ah oo aydaan aqoon idinka iyo awowayaashiin toona. Oo quruumahaas dhexdooda istareex kama heli doontaan, oo cagtiinnuna ma nasan doonto, laakiinse Rabbigu wuxuu halkaas idinku siin doonaa qalbigariir, iyo indhabbeel, iyo naf dulloobid. (Sharciga Kunoqoshadiisa 28:63-65)
Barakooyinkaas iyo Lacnadooyinkaas waxaa lagu aasaasay axdi (heshiis)
inaad gashaan axdiga Rabbiga Ilaahiinna ah iyo dhaarta Rabbiga Ilaahiinna ahu uu maanta idinla dhiganayo, inuu maanta dad idinka dhigto iyo inuu Ilaah idiin noqdo, siduu idiin sheegay oo uu ugu dhaartay awowayaashiin oo ahaa Ibraahim iyo Isxaaq iyo Yacquub. Oo idinka keligiinna idinla dhigan maayo axdigan iyo dhaartan, laakiinse waxaan la dhiganayaa ka maanta inala taagan halkan Rabbiga Ilaaheenna ah hortiisa, iyo ka aan maanta halkan inala taagnaynba. (Sharciga Kunoqoshadiisa 29:12-15)
Haddii si kale loo dhigo axdigan wuxuu noqon doonaa mid waajib ku ah caruurta, ama jiilalka mustaqbalka. Dhab ahaantii axdigan ay tilmaamaysay jiilalka mustaqbalka – reer binu Israa’iil iyo shisheeyaha labada
Oo Rabbigu wuxuu isaga qabiilooyinka reer binu Israa’iil oo dhan uga dhex sooci doonaa inuu belaayo ugu dejiyo siday yihiin dhammaan inkaaraha axdiga ee ku qoran kitaabkan sharciga. Oo qarniga soo socda oo ah carruurtiinna dabadiin kici doonta, iyo shisheeyaha dal fog ka iman doonaaba markay arkaan dalkaas belaayadiisa iyo cudurrada Rabbigu ku riday, iyo in dalka oo dhammu yahay baaruud, iyo cusbo, iyo meel guban, oo aan waxba lagu beerin, aanna dhalin, oo aan cawsna ka bixin innaba sidii markii la afgembiyey Sodom iyo Gomora, iyo Admaah iyo Seboyim oo Rabbigu ku afgembiyey cadhadiisa iyo xanaaqiisa, markaasay quruumaha oo dhammu odhan doonaan, Rabbigu muxuu dalkan sidaas ugu galay? Oo kulaylka xanaaqan weyn micnihiisu waa maxay?
Markaasaa dadku waxay odhan doonaan, Maxaa yeelay, iyagu waxay ka tageen axdigii uu Rabbiga ah Ilaaha awowayaashood la dhigtay markuu ka soo bixiyey dalkii Masar, oo intay tageen ayay u adeegeen oo caabudeen ilaahyo kale oo ayan aqoon, isaguna uusan siin, oo sidaas daraaddeed ayaa Rabbigu ugu xanaaqay dalkan, inuu ku soo dejiyo kulli inkaarta kitaabkan ku qoran oo dhan. (Sharciga Kunoqoshadiisa 29:21-27)
Ma Barakada iyo inkaarta Muuse inay dhacaan baa?
Barakooyinkii la ballanqaaday waxay ahaayeen cajiib, laakiin kan lagu Lacnaday oo lagu hanjabay waxay ahaayeen kuwo ka daran. Si kastaba ha ahaatee, su’aasha ugu muhiimsan ee aan waydiin karnaa waa: ‘Sidaas daraaddeed kuwan oo dhan ma dhaceen?’ si aan uga jawaabo waan arki doonaa haddii Muuse (NNKH) ahaa nin nebi ah oo run ah oo aannu u heli doono hanuun nolosheena maanta. Oo jawaabtu waxay tahay oo aan ka dhex guranayno. Inta ugu badan ee Axdiga Hore ee Buugga waa diiwaanka taariikhda reer binu Israa’iil, iyo in aan ka arki karnaa waxa ka dhacay. Oo weliba waxaannu haynaa diiwaano ka baxsan Axdiga Hore, kan taariikhyahanadu Yuhuudda sida Juusifuus, taariikhyahanadu Alyuunaani alrruumaani sida Taasitoos oo waxaannu helnay in xadaarooyin badan laga ogaaday dhismayaashii ka haray. Dhamaan ilahan oo dhan waxay isku raaceen oo ay sawir joogta ah ka bixisay taariikhda reer binu Israa’iil. Oo kanu waa Calaamad kale oo innagu filan. Halkan waxaa ku qoran warbixin guud ee taariikhda reer binu Israa’iil Sawirka la jadwallada si ay nooga caawiyaan si fiican u aragno waxa ku dhacay oo ah taariikhda.
Bal maxaynu ka arki karnaa taariikhdan? Haa runtii waxa lagu Lacnaday ee Muuse, looga cabsado sida ay MA inay dhacaan – Iyo sida saxda ah sida uu qoray kuwii kun oo sano ka hor – Waa ka horreeyey intaas oo dhan inta aysan dhicin (Xusuuso saadaasha ka mid ah ayaa soo qoray uma aan soo degin ka dib markii ay dhacday laakiin ka hor). Laakiin habaarka ee Muuse halkaas kuma soo afjarmin. Waa sii socotay. Halkani waa sida Muuse (NNKH) ku soo gabagabeeyay habaarradaas.
Oo markii waxyaalahan oo dhammu ay idinku dhacaan, kuwaas oo ah barakada iyo inkaarta aan idin hor dhigay, oo aad ku xusuusataan quruumaha Rabbiga Ilaahiinna ahu uu idinku kexeeyey dhexdooda oo dhan, oo aad Rabbiga Ilaahiinna ah u soo noqotaan oo aad idinka iyo carruurtiinnuba qalbigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan ku addeecdaan codkiisa iyo waxyaalahan aan maanta idinku amrayo oo dhan, markaasaa Rabbiga Ilaahiinna ahu idinka celin doonaa maxaabiisnimadiinna, wuuna idiin naxariisan doonaa, oo mar kaluu idinka soo ururin doonaa quruumihii Rabbiga Ilaahiinna ahu uu dhexdooda idinku kala firdhiyey oo dhan. Oo haddii masaafirradiinna qaarkoodu joogaan meesha samada ugu shishaysa, Rabbiga Ilaahiinna ahu halkaasuu idinka soo ururin doonaa, oo halkaasuu idinka soo kaxayn doonaa, markaasaa Rabbiga Ilaahiinna ahu wuxuu idin keeni doonaa dalkii awowayaashiin mar hore hantiyeen, oo idinna waad hantiyi doontaan, oo wanaag buu idiin samayn doonaa, wuuna idinka sii badin doonaa intii awowayaashiin ahaan jireen. (Sharciga Kunoqoshadiisa 30:1-5)
Su’aasha ku bahoon in la is weydiiyo (mar kale) waa: Taasi ma dhacday? Riix halkan si aan u aragno sii socoshadda taariikhdooda.
Dhamaadka Tawreedka – Zabuur ayaa la filayay
Kuwan ah barakada iyo inkaarta, Tawreed waxaa lagu soo gabagabeeyay. Nabi Muuse (NNKH) oo geeriyooday wax yar ka dib markii la dhamaystiray. Markaasaa reer binu Israa’iil, hoos bedelka Muuse – Jushuu – gala Dhulka iyo kuna noolaada. Sida loo sharaxay ee Taariikha reer binu Israa’iil, halkaas ayay degeen iyaga oo aan lahayn Boqor iyo sidoo kale aan lahayn magaalo caasimad u ah ilaa iyo intii Boqorkii weynaa ee Dawood ama Daawuud (ama David) u kacay inuu awoodyeesho. Waxa uu bilaabay qaybta cusub ee Axdiga Hore oo Quraanka xaqiijinayo in uu yahay Zabuur. Waxaan u baahanahay in la fahmo Zabuur maxaa yeelay waxa ay sii wadaa Calaamadaha lagu bilaabay Tawreedka – Kuwaasoo innaga caawin doona in aan fahamno Injiilka. Kan magaalkeenna inoogu xiga waxaan arkaynaa sida uu Quraanku iyo Ciise Masiix uga hadleen Dawood (NNKH) iyo Zabuur.
Author [email protected]Posted on 17/11/2016 Categories Calaamadaha iyo Mucjisooyinka ku qoran Tawreed iyo Qur’ankaTags Barakooyinka Eebe on Yuhuudda, barakooyinka Musa on binu Israa'iil, habaarkii Musa on binu Israa'iil, habaarkii Musa on Yuhuudda, inkaar Eebe on Yuhuudda, inkaaraha Musa, Iyo barakooyinka Musa on Yuhuudda, taariikhda reer binu Israa'iil, taariikhda Yuhuudda, waxa ay ahaayeen barakooyinka Musa
Previous Previous post: Calaamada Tawreedka ee Nabiga
Next Next post: Soo Bandhigida Sabuur